अफगानिस्तानको कथा : हिजोको हिन्दु-बौद्ध मुलुक कसरी भयो इस्लामिक ? - VOICE OF NEPAL
अफगानिस्तानको कथा : हिजोको हिन्दु-बौद्ध मुलुक कसरी भयो इस्लामिक ?
२७ माघ २०७५, आईतवार १६:३४ 105 ??? ???????
अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिणी मध्य एसियामा अवस्थित देश हो । जुन देश नेपाल जस्तै चारैतिरबाट जमीनले घेरिएको छ। यो देशमा लगातार चलिरहेको लडाइँले यसलाई कहिले मध्यपूर्व त कहिले दक्षिण एसियामा जोडिदिन्छ । यसको पूर्वमा पाकिस्तान, उत्तर पूर्वमा चीन, उत्तरमा ताजिकिस्तान, कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान र पश्चिममा इरान छ ।
अफगानिस्तान रेशम मार्ग र मानव प्रवासको एक प्राचीन केन्द्रबिन्दु रहेको छ । पुरातत्वविदले यहाँ मध्य पाषाण कालको मानव बस्तीको अवशेष भेट्टाएका छन् । यस क्षेत्रमा नगरीय सभ्यताको शुरुवात ३००० देखि २००९ इशापूर्वमा भएको मानिन्छ ।
यो क्षेत्र एक यस्तो भू-रणनीतिक स्थानमा छ जहाँबाट मध्य एशिया र पश्चिम एशिया भारतीय उपमहाद्वीपको संस्कृतिसँग जोडिन्छ । यस भूमिमा कुषाण, हफ्थलिट, समानी, गजनवी, मोहमद गौरी, मुगल, दुर्रानी र अनेक प्रमुख साम्राज्य उदाएका थिए ।
प्राचीनकालमा फारस तथा शक साम्राज्यको अंग रहेको अफगानिस्तान कयौँ सम्राट, आक्रमणकारी र विजेताको कर्मभूमि रह्यो । यिनमा सिकन्दर, फारसी शासक दारा प्रथम, तुर्क,मुगल शासक बाबर, मुहम्मद गौरी, नादिर शाह इत्यादिको नाम आउँछ । ब्रिटिश सेनाले पनि यहाँ कयौँ पटक आक्रमण गरे । अहिले अमेरिकाले तालिबानमाथि आक्रमण गरेपछि नाटोको सेना त्यहाँ बसिरहेको छ।
सातौँ शताब्दीसम्म अफगानिस्तान भारतखण्डको एउटा भूभाग थियो। अफगानिस्तान कुनै बेला एउटा हिन्दु राष्ट्र थियो। हिन्दुपछि यो बौद्ध राष्ट्र बन्न पुग्यो । अहिले आएर अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्रका रुपमा परिचित छ।
प्राचीनकालमा अखण्ड भारत अन्तर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार (बर्मा) र थाइल्यान्ड शामिल थिए ।
१७ औं शताप्दीसम्म अफगानिस्तानको नामसमेत केही थिएन । दक्षिण मध्य एसियाको यो देश वर्तमान समयमा कसरी चलिरहेको छ ? यहाँका मानिसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ ? आउनुहोस् जानौँ ।
अफगानिस्तानलाई आर्याना, आर्यानुम्र विजु, पख्तिया, खुरासान, पश्तुनख्वाह, रोह आदि नामले चिनिन्थ्यो। जसमा गान्धार, कम्बोज, कुम्भा, वर्णु र सुवास्तु आदि क्षेत्रहरू थिए । इशापूर्व ७०० सम्म यो देशको उत्तरी क्षेत्रमा गान्धार महाजनपद थियो । जसको बारेमा महाभारत तथा अन्य ग्रन्थमा पनि वर्णन गरिएको पाइन्छ ।
धृतराष्ट्रकी श्रीमती गान्धारी, महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनी र गुरु गोरखनाथ यही क्षेत्रका बासिन्दा थिए।
वैदिक धर्मको पालना
आज पनि अफगानिस्तानका गाउँमा बच्चाको नाम कनिष्क, आर्यन र बेद आदि राखिएको पाइन्छ। अफगानिस्तानमा पहिले आर्यहरूका ठुला ठुला वस्ती थिए । ती बस्तीका बासिन्दाहरु सबै वैदिक धर्मको पानला गर्ने गर्थे । त्यसपछि यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार भयो अनि बौद्धहरूको गढ बन्न पुग्यो।
कम उमेरमा विवाह
संयुक्त राष्ट्रको संस्था युनिसेफका अनुसार अफगानिस्तानमा ५० प्रतिशत मानिसको विवाह १५ वर्षको उमेरमै हुने गर्छ। ३३ प्रतिशन मानिसको विवाह १८ वर्षको उमेरमा हुने गर्छ। अफगानिस्तानमा १४ थरी जनजाति बसोबास गर्छन्। यो देशमा मोबाइल फोन बोक्नु प्रतिष्ठाको प्रतीक मानिन्छ।
अफगानी संस्कारमा हात मिलाउने कुरा सामान्य मानिन्छ । तर, महिला-पुरुषले एकापसमा हात मिलाएको देख्नु दुर्लभ नै हो। कडा इस्लामिक कानुन रहेको यहाँ एकअर्कासँग आँखा नजुधोस् भन्नेमा यहाँका महिला र पुरुष सचेत हुन्छन्।
अफगानिस्तानमा नयाँ वर्ष २१ मार्चमा मनाइन्छ जो वसन्त ऋतुको पहिलो दिन हो । अफगानीहरूले परिवारलाई धेरै महत्व दिन्छन् । यहाँ विवाहपछि पनि परिवारसँगै बस्ने गर्छन् ।
अफगानिस्तानको हैरत शहरमा हप्ताको एकदिन सोबमार राति कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ। कविता वाचन प्रतियोगितामा महिला, पुरुष र बालबालिका पनि समावेश हुन्छन्।
अफगानी मानिसहरू मुख्य रुपमा खेती गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। तथापि अफगानिस्तानमा प्राकृतिक ग्यास र तेलको ठुलो भण्डार पनि छ ।
अफगानिस्तानका बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि क्षेत्रमा हिन्दु र बौद्ध धर्मसँग जोडिएका अनेक मूर्ति, स्तूपा, बौद्घ बिहार, विश्वविद्यालय र मन्दिरहरूका अवशेष प्रशस्त भेटिएका छन् ।
कसरी भयो धर्म परिवर्तन
गजनवी वंशका एक महत्वपूर्ण शासक महमुद गजनवीले सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा ब्यापक मात्रामा धर्म परिवर्तन गराए । इस्लामिक शासन लाद्ने क्रममा उनले लुट मात्रै मच्चाएनन् अफगानिस्तानका हिन्दु र बौद्धलाई इस्लाम धर्म अपनाउन बाध्य पारे ।
९७१-१०३० सम्म शासन गरेका उनले आफूले जितेको क्षेत्रमा हिन्दु-बौद्ध मन्दिर, शिक्षा केन्द्र, र कयौँ धार्मिक भवन नष्ट गराए । आफ्नो साम्राज्य पाकिस्तान र उत्तरी भारतसम्म बिस्तार गर्ने क्रममा उनले ब्यापक धर्म परिवर्तन गराएका थिए । इस्लामिक शासन ल्याउन मच्चाएको लुट र आक्रमणका कारण भारतीय हिन्दु समाजमा उनलाई एउटा क्रुर शासक चिनिन्छ । उनी तुर्क मुलका थिए ।
कति छन् हिन्दु
अफगानिस्तानमा हिन्दू धर्म अपनाउने मानिसको संख्या अहिले एकदमै थोरै भइसकेको छ । उनीहरुको संख्या अहिले करिब एक हजार रहेको अनुमान छ । उनीहरु धेरैजसो काबुल र अफगानिस्तानका अन्य प्रमुख नगरमा बसिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानमा पर इस्लामिक शासन आउनुपूर्व यो देश बहुधार्मिक थियो । तर यहाँ त्यो बेलासम्म धेरैजसो हिन्दू र बौद्ध धर्मका अनुयायी थिए । एघारौँ शताब्दीमा अधिकांश मन्दिर भत्काएर तिनलाई मस्जिदमा परिणत गरेसँगै यहाँ हिन्दुको जनसंख्या ओरालो लागेको हो ।
अफगानिस्तानको बामियानमा चौथो र पाँचौ शताब्दीमा बुद्धको दुई विशाल मूर्ति उभिएका थिए । यी काबुलको उत्तर-पश्चिम दिशामा २३० किलोमिटर (१४० माइल) को दुरीमा थिए । यी मूर्ति २५०० मिटर (८२०० फिट) को उचाईमा थिए। यिनमा सानो मूर्ति सन् ५०७ मा र ठुलो मूर्ति सन् ५५४ मा बनाइएका थिए । यी क्रमश: ३५ मिटर (११५ फिट) र ५३ मिटर (१७४ फिट) उचाईका थिए ।
मार्च २००१ मा अफगानिस्तानको जेहादी संगठन तालिबानका नेता मुल्ला मोहम्मद उमरको आदेशमा पर डाइनामाइटबाट यी मूर्तिमा ठुलो क्षति पुर्‍याइयो ।